Soo dejisan Calibre 4.21 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Calibre
Raaxeysanayo – fudud ah si ay u isticmaalaan software in uu akhriyo eBuugaag ah. software wuxuu ka kooban yahay dhowr ah qalab loogu talagalay search sare oo gacanta ku ururinta buugaagta. Raaxeysanayo, waa ay awoodaan in ay qaadaan tirada font iyo diinta ee e-buugaagta qaab lagama maarmaanka ah. software The falgala qalabka ee akhriska e-buugaagta iyo si toos ah ogaadaa format fiican inta lagu jiro dajinta ee buugaagta in qalab aad. Raaxeysanayo, sidoo kale waxaa ku jira module gaar ah si aad u hesho oo la saxo khaladaadka caadi ah ee qaab dhismeedka of buugaagta.
Taageerada qaabab e-buugga aasaasiga ah
Badalidda buugaagta galay qaab kale
Management of e-buugaagta
nidaamka search haboon
Isku dhex qalabka ee akhriska e-buugaagta
Soo dejisan Calibre
Faallo ku saabsan Calibre
Calibre Xirfadaha la xiriira